Kastamka - Absolut Viajes | Safarka Absolut (Bogga 2)
Cusbi mastarka, ku dhashay Chios
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan Giriigga oo ka yimaada jasiiradda Griigga ee quruxda badan ee Chios: cusbada mastic.
Waxaa jira isboorti caan ah oo badan oo Ingriiska ka yimid asal ahaan wadankaan sida kubada cagta, golf, kubbadda miiska, cricket ama rugby.
Cunnooyinka Hindida waxaa lagu yaqaan dhadhankiisa, caraftiisa, iyo midabbada. Nala soo baro dhir udgoon oo aan ka maqnaan karin jikadaada!
Nagala soo qaybgal safarkan adoo maraya dhulalka Colombia si aad uga hesho kuleylka iyo dhadhanka nooca ugu fiican.
Wadamada Koonfurta iyo Bariga Aasiya, laga bilaabo Hindiya ilaa Shiinaha, gaadiid dhaqameed loo yaqaan 'rickshaw' ayaa aad caan u ah. Halkee ka timid?
Sidee loo xusaa Maalinta Saddexda Boqor ee Argentina
Saddexda Maalin ee Boqortooyada Arjantiin waa taariikh sixir ah, waa maalin la wada sugaayay markii Melchor, Gaspar iyo Baltasar ay hadiyado u keenaan carruurta.
On February 14, Maalinta Jacaylka ama Maalinta Jacaylka waxaa looga dabaaldegaa adduunka oo dhan, sidoo kale in Italy.
Kirismas-ka Cuba wax yar ayuu ka duwan yahay kuwa looga dabaal dago waddamada kale ee Latin Amerika, in kasta oo waliba loo xuso si xamaasad leh
Maxay ahaayeen caadooyinka Mayaanku? Waxaan u sharxeynaa dhaqankooda la xiriira dhaqaalaha, diinta, siyaasadda, bulshada ama sayniska.
Monastiraki, suuqa xoolaha ee Athens
Monastiraki, suuqa xayawaanka ee Athens, wuxuu ku siinayaa dhammaan soojiidashada suuqyada dhogorta, laakiin sidoo kale taallooyin aad u fiican iyo gaashansoor.
Marka loo eego Xeerka Astaanta Qaranka ee Kanada, sharci la soo saaray 1975, waa la aqoonsan yahay oo lagu dhawaaqay in beater ...
Dalka Baraasiil, oo ah dal leh dhaqan dheer oo kaatoolig ah, waxaa jira dad badan oo, markay arkeen indhahoodu aan fiicnayn, go'aansaday inay "la dagaallamaan".
Dabaal-degga goosashada oo ah dabaaldegyo nimcooyin ka yimid waqtiyadii jaahiliga
Bandhigga goosashada waa dabbaaldeg ku baahsan adduunka oo dhan. Asalkiisu wuxuu ka soo bilaabmay wakhtigii aadamuhu bilaabay beeraha.
Sida ay ugu ciidaan dalka Shiinaha
Waxaan markaa u maleyn karnaa in Shiinuhu aysan u dabaaldegin Kirismaska, ciida masiixiga heer sare. Si kastaba ha noqotee, tani maahan kiiska, ama ugu yaraan ma ahan gebi ahaanba.
Sidee loogu dabaaldegaa kirismaska ​​Kanada?
Meelo waaweyn oo geedo dhaadheer iyo geedo waaweyn, buuro dhaadheer iyo baraf fara badan ayaa caan ku ah Kanada iyo sidoo kale waxa aan dhammaanteen maskaxdeenna ku dhiseyno markaan malayno muuqaalka kirismaska.
Xirfadaha iyo Dhaqannada Kanadiyaanka
Ma ogtahay in kudhowaad 300 kun oo aborijinis ah ay ku nool yihiin Kanada oo ku hadla 58 luqadood ama lahjadood oo ka kooban toban koox luqadeed ...
Hanami ma taqaan? Waa dhaqan Jabaan ah oo la xidhiidha ubaxyada cherry. Daqiiqad u gaar ah sanadka oo ay tahay in la ogaado.
Dhaqamada kirismaska ​​ee Brazil
Dhaqammada kirismaska ​​ee Brazil waa natiijada isku dhafka dhaqammada ka kooban waddankaas Mareykanka. By…
Caadooyinka iyo caadooyinka Masaarida
Ma rabtaa inaad wax yar ka ogaato waxyaabaha ku saabsan caadooyinka iyo dhaqammada Masaa'is? Macluumaad aad u qiimo badan oo noo sheegaya sida ay u nool yihiin.
Waxaa jira caadooyin badan oo ka jira Faransiiska oo aan soo qaadan karno. Laakiin waxaan uga tagnay kuwa ugu xididdada badan ee ay tahay inaad ogaato. Diyaar ma tahay mise waa diyaar?
Dib u eegis ku saabsan caadooyinka Brazil ee aad ogaan doonto iyo kuwa kale oo ay tahay inaad ogaato. Maaddaama dhammaantood ay qayb ka yihiin dhaxalkiisa.
Dhammaan wixii ku saabsan xiisaha dhaqanka Hindida iyo xaqiiqooyinka ugu xiisaha badan ee ku saabsan dhaqanka Hindida, bulsho gaar ah oo kaa yaabin doonta.
Soo ogow guryaha Taíno ee Cuba iyo soo jiidashadooda. Taariikh noocee ah ayaa ka dambeysa guryahaan dabiiciga ah ee dhaqanka Cuba? Soo gal oo soo ogow!
Tilmaamaha Cuba, haa ama haa
Lacag miyuu ku haray Cuba? Haddayse tahay, immisa? Dhammaan waxay kuxirantahay!
Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato kahor intaadan aadin Ruushka
In kasta oo Ruushku yahay waddan layaableh, haddana waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad ogaato oo aad ogaato kahor imaatinkaaga. Baasaboorku waa wax aasaasi ah
Maxaa la siinayaa Shiinaha iyo waxa aan la siinin
Haddii aad u safreyso Shiinaha, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid sharciyadan ku saabsan waxa la siinayo iyo waxa aan la siinin. Shiinuhu waa dhib badan yihiin!
Talyaani, talo ama maya
Ma ogtahay haddii aad Talyaanigu ku qasban tahay inaad lacag ka tagto? Halkan waxaan kaaga tagayaa meesha, goorta iyo sababta.
Talooyin ma ku hartay Shiinaha? Waa caadi? Xagee, kiisaskee? Haddii aad u safarto Shiinaha, qor macluumaadkan wax ku oolka ah.
Booqashada Montreal 4 maalmood gudahood
Ma qorsheyneysaa inaad safar ugu baxdo Montreal oo aad maalmo ku qaadato booqashada magaalada? Imisa maalmood ayey ku qaadataa booqashada magaalada ...
Geedka Kirismaska ​​ee Ruushka
In kasta oo waxyaabo badani ku kala duwan yihiin Kirismaska ​​Ruushka, geedka kirismaska ​​wali waa udub dhexaadka qurxinta
Bohonadii Shiinaha hore
Eunuchs-ka Shiinaha qadiimiga ah way badnaayeen waxayna ka shaqeeyaan qasriga Imperial
Geeska Alpine waa qalab ka samaysan alwaax dabiici ah, tuubo mitir iyo badh ah ama xitaa saddex dherer ah, oo leh af-hayeen iyo dhammaad wareegsan.
Kanada waxay noqotay meel la tagi karo: sicirka duulimaadyada waxay noqdeen kuwa la awoodi karo oo dhaqso badan.
Inuksuk, monoliths-ka dadka Inuit
Inuksuk waa taallo dhagax weyn ama tiirar ay adeegsadaan Inuit, Inupiat, Kalaallit, Yupik, ...
Kirismaska ​​Bahamas, xafladda Carnival
Diisambar waa xilli carnival loogu talagalay dadka Bahamas. Oo waa in Christmas iyo Carnival ay isku mid yihiin ...
Caadooyinka iyo Caadooyinka Aruba ee Kirismaska
Kirismaska ​​Aruba ma dhammaystirmi lahayn haddii aan la helin qurxinta iftiinka kirismaska ​​ee Seroe Preto ee Oranjestad….
Farshaxanka iyo dhaqanka jasiiradda Saint Martin
Mid ka mid ah meelaha quruxda badan ee loo maro Badda Kariibiyaanka waa jasiiradda Saint Martin (Saint Martin) oo bixisa ...
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Cuba
Cuba waa waddan ku yaal waqooyiga Kariibiyaanka oo bixiya noocyo badan oo dalxiis oo dalxiis 365 ...
Easter waa mid ka mid ah ciidaha Masiixiyiinta ugu muhiimsan. Sida wadamada Ameerika iyo Yurub, ...
Qoob ka ciyaarka Chechenka
Sababaha ugu sareeya ee 10 ee booqashada Ruushka
Dadka: Haweenka Ruushku waxay caan ku yihiin quruxdooda, xeel dheer iyo xarrago. Laakiin sifooyinkaasi way sii dheereynayaan ...
Tilmaamaha safarka ee Ruushka: ilbaxnimada iyo akhlaaqda wanaagsan
Waxaa jira sharciyo gaar ah oo ilbaxnimo oo ay tahay inaad ogaato haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto waddankan oo aad saaxiib la noqotid. Waana taas ...
Ciyaaraha qoob ka ciyaarka ee Shiinaha: Kexigela
Kexigela waa qoob ka ciyaarka qowmiyada Qiang. Qiang hadda waxay ku nool yihiin aagga Waqooyiga Sichuan,…
Dhaqannada iyo caadooyinka Ruushka: Shrovetide
Laga soo bilaabo usbuucii ugu dambeeyay ee Febraayo illaa bilowga Maarso, toddobaad ka hor inta aan la gaarin, Carnival-ka Ruushka ayaa la xusaa ...
Caadooyinka iyo dhaqamada Tibet
Mid ka mid ah dhacdooyinka caanka ah ee dadka Tibetan waa tartanka fardaha, oo ah xaflad u gaar ah ...
Qoob-ka-ciyaarku waa qaab muuqaal ah oo muuqaal iyo farshaxanimo leh oo ku qotoma wacyiga iyo dhaqannada caanka ah ee Ruushka….
Khuraafaadka iyo aaminaadaha Dominicans I
Khuraafaadka iyo waxa la aaminsan yahay waa qeyb ka mid ah hiddaha iyo dhaqanka dadka. Tirada dadka Dominicanku kuma cusba inay aaminaan ...
Maxaa laga sameeyaa Cuba dhamaadka sanadka?
Fiidka sanadka cusub, Diseembar 31, waa habeenka ugu sixirka badan Cuba. Magaalooyin badan ayaa u dabaaldega ...
Taariikhda Dominican Bachata
Bachata Dominican waa nooc muusig ah oo ka bilaabanaya xaafadaha yar yar iyo miyiga ...
Québec xilliga Kirismaska
Haddii aad maskaxda ku hayso meel aad ku nasatid kirismaska ​​Kanada dhexdeeda, meesha aad aadi laheyd waa Quebec. Hayso…
Dhaqamada kirismaska ​​ee Kanada
Dad badan oo reer Kanada ah waa inay shaqeeyaan Habeenkii Kirismaska, laakiin sidoo kale waa maalin loo diyaargaroobo ...
Kubbadda koleyga: waa ciyaar isboorti qaran oo ka dhacday Dominican Republic
Inta badan wadamada adduunka isboortiga ugu caansan, kan leh xididada ugu waaweyn, kan dhaqaaqa ...
Suuqyada gobolka, alaabooyin wanaagsan
Mid ka mid ah waxyaabaha aadan joojin karin isku dayga marka aad joogto dal shisheeye waa cunnadiisa. Qof walba…
Hadiyado loogu talagalay aroosyada Hinduuga
Aroosyadu had iyo jeer waa dhacdooyin wacan oo laqaban karo markasta oo casuumaad timaado, ama xubnaha qoyska ...
Farshaxanka iyo dhaqanka Filibiin
Filibiin waxaa caan ku ah adduunka oo dhan farsamada gacanta. Dukaameysiga ayaa ah cudurdaarka ugu fiican ee lagu sahaminayo ...
Henna: khad dabiici ah oo Hindi ah oo loogu talagalay tattoosyada iyo timaha
Kuwa doonaya inay u muuqdaan kuwo wanaagsan oo moodada ah, tatuuyuhu macnaheedu maahan inay calaamad u yihiin maqaarka ...
Markabka San Trovaso, warshad farshaxan gondola oo ku taal Venice
Meesha Talyaanigu ku leeyahay Venice ay ku sameeyaan gondolas-ka caanka ah waxaa lagu magacaabaa Squero. Waa barxad markab, ...
Gastronomy-ka Ruushka: saladhyada, soogalootiga iyo caadooyinka
Waxaan mar kale si faahfaahsan uga hadli doonnaa gastronomy-ka Ruushka, suxuunta ugu weyn, cuntooyinka gobolka iyo qaar xiisaha leh, maanta waan joojin doonnaa ...
Cudurka caloosha ee Mangooliya
Mongolia waa wadan weyn oo kuyaala inta udhaxeysa gobolada Bariga Aasiya iyo Bartamaha Aasiya waana hadhaaga ...
Xeebaha Nudist ee Cuba
Ma jeceshahay inaad qaawan ku socoto xeebta? Ma lihid nooc isku dhafan oo jirkaaga ah ama way kugu dhibaysaa inaad aragto ...
Nimbu Pani: cabitaanka caadiga ah ee Hindiya
Casiirka afar liin ama liin dhanaan, litir biyo ah, sonkor ama malab, biyo kacay oo hadaad rabto xoogaa milix ah sameyso cabitaan liin macaan oo cusboonaysiin ah oo Hindiya looga yaqaan Nimbu Pani.
Suugada Irishka (Qeybtii Ugu Dambeysay)
Si loo dhammeeyo liiska saddexda suugada ee loogu isticmaal badan yahay Ireland iyo gaar ahaan gobolka ...
Suugada Irishka (Qeybta Koowaad)
Markaad booqato Ireland iyo gaar ahaan gobolka Dublin, waxaad ogaan doontaa in dhammaan suxuunta ay ku jiraan hilibka, digaagga ...
Jijimadii jacaylka ee Hindiya
Waxaa jira dhaqan Hindi ah oo qurux badan oo soo jireen ah oo ah bixinta jijin la yiraahdo rakhi taas oo lagu sameeyay qaabkeeda ugu fudud ee dunta casaanka ah ee casaanka laakiin in muddo ah ayaa loo beddelay iyadoo lagu daray noocyo kale oo qalab ah sida dunta dahabka ah ama dhagaxyada qaaliga ah ee qaaliga ah.
Xeerarka cuntada Talyaaniga
Dhanka cuntada waxaad ogaan doontaa in Talyaanigu leeyahay sharciyo badan oo haddii qof jabiyo ay awoodaan ...
Kaadida lo’da: waxtar ayey u leedahay caafimaadka?
Waa waali in loo maleeyo in Hindiya ay u abuurtay cabitaan dhaqameed cabitaan jilicsan oo ku saleysan kaadida ...
Rickshaws: Gaadiidka Hindida ee Dhaqanka
Ku safridda Hindiya macnaheedu waa adduun dhan oo shucuur iyo dareenno kala duwan leh. Markan waxaan ka hadli doonaa gaadiidkooda dhaqameed, ...
Tanjia Marrakechia, cunnada Marooko
Tanjia Marrakechia, gastronomy Moroccan Cuntadan quruxda badan ee cunnada dhaqanka Moroccan waxay bixisaa qaab gaar ah oo loo diyaariyo wan, for
Meelaha laga kalluumeysto Cuba, qeybta koowaad
Runtu waxay tahay in Kuuba ay gaar u tahay Antilles si ay ugu raaxeysato kalluumeysiga ama ay ugu tababarto kalluumeysiga isboortiga si xirfad leh…
Meelaha xurmada leh ee Hindiya
Hindiya gudaheeda, waxaa jira dhaqan soo jireen ah oo xajka lagu tago meelaha ilaa maanta la tixgeliyo ...
Muusiga Hindiga: Melody ee Gods
Muusiga dhaqameed ee Hindiya, marar badan ayaa sidoo kale loo yaqaanaa muusiga Hindiga, tan oo ah diinta ugu weyn iyo ...
Brunost, khasnadda gastronomic ee Norwey
Brunost waa jiiska caadiga ah ee Norwey, magaceeda waxaa u sabab ah midabka midabka buniga ah ee ay leedahay, oo leh macaan iyo ...
Ku guursanaya casaan, caado shiineys ah
Guurku waa dhaqan soo jireen ah ku dhowaad dhammaan dhaqamada adduunka laakiin waa run midkastoo ...
Luuqada looga hadlo Japan waa mid muhiim u ah dalxiisayaasha in luqadani tahay ta ay ku hadli doonaan dhamaan dadka ku hareeraysan deegaanka. Ogaanshaha xitaa fikradaha aasaasiga ah ee ku saabsan luqadda Japanese-ka ayaa wax badan kaa caawin doonta intaad joogto, haddii ay tahay inaad taksi qaadato, raacitaanka Metro-ka, dukaamaysiga ama xitaa baaskiil aad kiraysato.